people Nepal » ‘गोर्खाली’ भन्दा गौरब, ‘नेपाली’ भन्दा अपमान ? ‘गोर्खाली’ भन्दा गौरब, ‘नेपाली’ भन्दा अपमान ? – people Nepal
‘गोर्खाली’ भन्दा गौरब, ‘नेपाली’ भन्दा अपमान ?
१० असार, काठमाडौं । भारतको ‘गोर्खाल्याण्ड’ आन्दोलनलाई नेपालीहरुले समर्थन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै ‘असमेली गोर्खा’ नामक फेसबुक पेजमा प्रश्न गरिएको छ- ‘किन नेपालीहरु यतिसाह्रो मूर्ख भएका ? तिनीहरु के गर्न चाहन्छन् ?